ဘုရားကျောင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ခြောက်ခု - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင်၏ဆွစ်ဇာလန်ဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > အသင်းတော် > အသင်းတော်ခြောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အပတ်စဉ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်သင်ကြားခြင်းများအတွက်တွေ့ဆုံကြသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝတ်ပြုခြင်းကိုပြုလုပ်ခြင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အိမ်တွင်းရှိရေဒီယိုမှဟောပြောချက်ကိုအားစိုက်ထုတ်မှုနည်းပါးစွာနားထောင်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်မဟုတ်လော။
ပထမရာစု၌လူတို့သည်ကျမ်းစာကိုကြားနာရန်အပတ်စဉ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ကျမ်းစာမိတ္တူများကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အိမ်မှာနေပြီးကျမ်းစာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖတ်ပါ။ ဒါဟာသေချာပေါက်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ် - နှင့်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာ။ ခေတ်သစ်နည်းပညာဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သူမဆိုသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးတရားဟောဆရာများကိုအပတ်တိုင်းနားထောင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောတရားဒေသနာများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုသာနားထောင်နိုင်သည်။ ဒါအံ့သြစရာမဟုတ်လား
မဟုတ်ပါ။ အိမ်မှာနေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေဟာချာ့ချ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ aspects တော်တော်များများမှာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ငါဒီဆောင်းပါးမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖြေရှင်းမယ်၊ သစ္စာရှိ visitors ည့်သည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အစည်းအဝေးတွေကနေဝေးဝေးသွားဖို့နဲ့အပတ်စဉ် ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုတက်ဖို့တခြားသူတွေကိုအားပေးဖို့နှစ်မျိုးစလုံးမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်အပတ်တိုင်းတွေ့ဆုံရကြောင်းကိုနားလည်ရန်“ ဘုရားကျောင်းကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်တီးခဲ့တာလဲ” ဟုမိမိကိုယ်ကိုမေးခြင်းသည်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကားအဘယ်နည်း။ ဘုရားကျောင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလေ့လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးများသည်သူ၏သားသမီးများအတွက်ဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့်အညီအမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များကိုမည်သို့ဆောင်ရွက်ကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။
မင်းမြင်တယ်၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ ပညတ်တော်တွေဟာ ငါတို့ခုန်လို့ ခုန်မလားဆိုတာ သိဖို့သက်သက်နဲ့ အမိန့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ပါ၊ ကိုယ်တော်၏ပညတ်တော်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ငယ်ရွယ်သောခရစ်ယာန်များဖြစ်သောအခါ၊ အချို့သောအရာများကို ကိုယ်တော်မိန့်မှာထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နားမလည်နိုင်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြောင်းပြချက်အားလုံးကို နားမလည်မီတွင်ပင် နာခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို အကောင်းဆုံးသိကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပြီး သူပြောသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်ယာန်လူငယ်တစ်ဦးသည် ခရစ်ယာန်များပြုလုပ်ရန် မျှော်လင့်ထားသောကြောင့် ဘုရားကျောင်းတက်နိုင်သည်။ ခရစ်ယာန်လူငယ်တစ်ဦးသည် ဟေဗြဲဘာသာဖြင့် ဝတ်ပြုဆုတောင်းရုံဖြင့် တက်ရောက်နိုင်သည်။ 10,25 "ငါတို့အစည်းအဝေးတွေကို မထားခဲ့ရအောင်..." အခုထိ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၌ ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှ ဘုရားသခင်သည် သူ၏လူများကို အဘယ်ကြောင့် စုဝေးရန် အဘယ်ကြောင့် မိန့်မှာထားသည်ကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နားလည်လာသင့်သည်။
ဤအကြောင်းအရာကို ဆန်းစစ်ရာတွင်၊ ဟေဗြဲကျမ်းသည် ခရစ်ယာန်များကို စုစည်းရန် တစ်ခုတည်းသောစာအုပ်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုမိကြစို့။ “အချင်းချင်းချစ်ကြလော့” ဟု တပည့်တော်များအား ယေရှုမိန့်တော်မူသည် (ယော ၁3,34) ယေရှုက “အချင်းချင်း၊” ဟုဆိုသောအခါ လူအားလုံးကို ချစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား တပည့်များသည် အခြားတပည့်များကို ချစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်းကို ရည်ညွှန်းသည်- ၎င်းသည် အပြန်အလှန် မေတ္တာဖြစ်ရမည်။ ဤမေတ္တာသည် ယေရှု၏တပည့်တော်များ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည် (း၃၅)။
ကုန်စုံဆိုင်နှင့် အားကစားပွဲများတွင် အခွင့်အလမ်းတွေ့ဆုံပွဲများတွင် အပြန်အလှန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မဖော်ပြပါ။ တပည့်များ ပုံမှန်တွေ့ဆုံရန် ယေရှုမိန့်မှာသည်။ ခရစ်ယာန်များသည် အခြားခရစ်ယာန်များနှင့် ပုံမှန်မိတ်သဟာယဖွဲ့သင့်သည်။ “လူအပေါင်းတို့အား ကျေးဇူးပြုကြကုန်အံ့။ အများအားဖြင့် ယုံကြည်သောသူတို့အား ကျေးဇူးပြုကြကုန်အံ့ 6,10) ဤပညတ်တော်ကို နာခံရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်သူချင်းများကား မည်သူဖြစ်သည်ကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဲဒါတွေကို မြင်ဖို့လိုတယ်၊ သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို မြင်ရမယ်။
ဂလာတိအသင်းတော်ထံ ပေါလုရေးခဲ့သည် (ဂလာတိ) 5,13) ကျွန်ုပ်တို့သည် မယုံကြည်သူများကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ အမှုဆောင်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ယင်းကိုပြောပြရန် ဤကျမ်းပိုဒ်ကို မသုံးပါ။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား လောကီအစေခံရန် မိန့်မှာထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့အား လောကကို အစေခံရန် အမိန့်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ ခရစ်တော်နောက်လိုက်သူတို့တွင် အပြန်အလှန်အမှုဆောင်ရန် အမိန့်ပေးတော်မူ၏။ “ထမ်းရွက်ရသောဝန်ကို အချင်းချင်း ထမ်းကြလော့။ ခရစ်တော်၏တရားတော်ကို ပြည့်စုံစေလိမ့်မည်။” (ဂလာတိ၊ 6,2) ပေါလုသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို နာခံလိုသူများနှင့် ဟောပြောပြီး အခြားယုံကြည်သူများအပေါ် သူတို့တွင်ရှိသော တာဝန်များအကြောင်း ပြောပြသည်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေက ဘာလဲဆိုတာ မသိရင် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ၊ ပုံမှန်မတွေ့ဆုံဘဲနဲ့ အဲဒါတွေကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
“အလင်း၌ကျင်လည်လျှင်၊1. ဂျိုဟန် 1,7) John က အလင်းထဲမှာ လမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေအကြောင်း ပြောနေတာ။ သူသည် မယုံကြည်သူများနှင့် ပေါ့ပေါ့တန်တန် သိကျွမ်းခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဝိညာဉ်ရေးရာ မိတ်သဟာယ အကြောင်းကို ပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလင်း၌ကျင်လည်စဉ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားယုံကြည်သူများနှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန် ရှာဖွေကြသည်။ အလားတူပင် ပေါလုက “အချင်းချင်းလက်ခံကြလော့” (ရောမ ၁ ကော5,7) “အချင်းချင်း ကျေးဇူးပြု၍ အချင်းချင်း ခွင့်လွှတ်ကြလော့” (ဧဖက် 4,35) ခရစ်ယာန်များသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အထူးတာဝန်ရှိသည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် အတူတကွဝတ်ပြုရန်၊ အတူတကွသင်ယူရန်၊ ၎င်းတို့၏အသက်တာကို အတူတကွမျှဝေရန် အစောပိုင်းခရစ်ယာန်များစုရုံးကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုခဲ့သည် (ဥပမာ၊ တမန်တော်ဝတ္ထု၊ 2,41စာ-၄၇)။ ပေါလုသွားလေရာရာ၌ ပြန့်ကျဲနေသော ယုံကြည်သူများကို မစွန့်ဘဲ အသင်းတော်များကို စိုက်ထူခဲ့သည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ထက်သန်မှုကို ဝေမျှရန် စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ဤသည်မှာ သမ္မာကျမ်းစာပုံစံဖြစ်သည်။
သို့သော်ယနေ့ခေတ်တွင်လူများသည်တရားဒေသနာမှသူတို့နှင့်ဘာမှမယူပါဟုတိုင်တန်းကြသည်။ ဒါကမှန်တယ်မှန်ပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့အစည်းအဝေးတွေမတက်ဖို့အကြောင်းပြချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသို့သောသူများသည်သူတို့၏ရှုထောင့်ကို“ ယူခြင်း” မှ“ ပေးကမ်းခြင်း” သို့ပြောင်းလဲကြရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသွားရန်သာမကဘဲဘုရားသခင်အားစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဝတ်ပြုရန်နှင့်ရပ်ကွက်ရှိအခြားသူများ၏အစေကိုခံရန်အတွက်သာသွားကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းလုပ်ငန်းများတွင်အချင်းချင်းမည်သို့အမှုဆောင်နိုင်သနည်း။ ကလေးများအားသင်ကြားခြင်း၊ အဆောက်အအုံကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ သီချင်းများသီဆိုခြင်းနှင့်အထူးတေးဂီတဖွင့်ခြင်း၊ ကုလားထိုင်များထားခြင်း၊ လူများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းစသည်ဖြင့်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အခြားတစ်ပတ်တွင်အခြားသူများအားကူညီရန်လိုအပ်သောအရာများရှာဖွေခြင်း။ တရားဒေသနာမှသင်ဘာမှမရရှိပါကအနည်းဆုံးအခြားသူများအားပေးရမည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုတက်ရောက်ပါ။
ပေါလုဤသို့ရေးသားခဲ့သည်– “သင်တို့သည် အချင်းချင်းအားပေး၍ အချင်းချင်းတည်ဆောက်ကြလော့။” (2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 4,18) “ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကောင်းသောအကျင့်ရှိစေခြင်းငှာ အချင်းချင်း နှိုးဆော်ကြကုန်အံ့။” (ဟေဗြဲ၊ 10,24) ဤသည်မှာ ဟေဗြဲဘာသာဖြင့် ပုံမှန်အစည်းအဝေးများအတွက် ပညတ်တော်၏အခြေအနေတွင် တိကျသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ 10,25 ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများကို အားပေးရန်၊ အပြုသဘောဆောင်သော စကားလုံးများ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ရန်၊ မှန်ကန်သော၊ ချစ်စဖွယ်ကောင်းသော၊ ကောင်းသော ရပ်တည်မှုဖြစ်စေရန်။
ယေရှုဆီကဥပမာတစ်ခုကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ သူသည်တရားဇရပ်သို့မှန်မှန်သွားပြီးသူ့အားနားလည်ရန်ဘာမျှမလုပ်ဆောင်သောကျမ်းစာမှဖတ်ရှုချက်များကိုမှန်မှန်နားထောင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်သူသည်မည်သို့ပင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သည်ကိုသွားခဲ့သည်။ ပေါလုကဲ့သို့ပညာတတ်ယောက်ျားအတွက်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၊
သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုယုံကြည်သောသူများသည်၎င်းကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားသင့်သည်။ သူတို့သည်ကယ်တင်ရှင်အားချီးမွမ်းရန်အခြားသူများနှင့်အတူတကွလာခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တစ်ခါတလေကျွန်ုပ်တို့မှာမကောင်းတဲ့နေ့တွေရှိပြီးဘုရားကျောင်းကိုမသွားချင်ကြဘူး။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘ ၀ ကိုဖြတ်သန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရုံမျှသာမဟုတ်၊ သခင်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏သခင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်လျှောက်သောအခါမဟုတ်ပါ။ သူသည်မိမိ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန်မဟုတ်ဘဲခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ကြိုးစားသည်။ တခါတရံငါတို့ကဆင်းလာဘယ်မှာပါပဲ။ အခြားအရာအားလုံးမအောင်မြင်ပါကအဟောင်းများကိုပြောပါ၊ ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲကိုဖတ်ပါ။ နှင့်ညွှန်ကြားချက်များန်ဆောင်မှုမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ? ဘုရားကျောင်းကဘာလဲ။ ချာ့ချ်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည် - အထက်သို့၊ အအပြင်နှင့်အပြင်။ ဤစည်းရုံးမှုအစီအစဉ်သည်မည်သည့်အစီအစဉ်ကဲ့သို့ပင်အားသာချက်များနှင့်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းပါသည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အထက်ဆက်ဆံရေးသည်ပုဂ္ဂလိကနှင့်လူသိရှင်ကြားဖော်ပြမှုနှစ်ခုလုံးရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုမပြပါ။ ချာ့ချ်အတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှိလူအားလုံးအတွက်တူညီသောအချက်မဟုတ်ကြောင်းဖုံးကွယ်ထားသည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွင်း၌သာမကပြင်ပအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းတွင်၎င်း၊
ဘုရားသခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည် ပုဂ္ဂလိကနှင့် အများသူငှာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးစလုံး လိုအပ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အများသူငှာဆက်ဆံရေးကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့် စတင်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး တစ်ကိုယ်တည်းနေချိန်တွင် ဘုရားသခင်ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုဟူသော ဝေါဟာရသည် အများအားဖြင့် အများသူငှာ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သောအရာကို ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုးကွယ်မှုသည် တန်ဖိုးရှိသောစကားလုံးနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောအခါတွင် တန်ဖိုးရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အတည်ပြုသည်။
ဤတန်ဖိုး၏ ကတိပြုချက်ကို သီးသန့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များတွင်၊ လူသိရှင်ကြား၊ စကားလုံးများနှင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသီချင်းများမှတစ်ဆင့် ဖော်ပြသည်။ ၌ 1. ဓာတ်ဆီ 2,9 ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကို ကြွေးကြော်ရန် ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ဒါက အများသူငှာ ထုတ်ပြန်ချက်ကို အကြံပြုပါတယ်။ ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ် နှစ်ခုစလုံးသည် ဘုရားသခင် ၏လူများသည် အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဘုရားသခင်ကို အတူတကွ ကိုးကွယ်ကြသည်ကို ဖော်ပြသည်။
ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှသမ္မာကျမ်းစာပုံစံကသီချင်းများသည်ဝတ်ပြုရေး၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သီချင်းများသည်ဘုရားသခင်အပေါ်ထားရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုဖော်ပြသည်။ သီချင်းများသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ခံစားရသောခံစားချက်အမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာ တူညီတဲ့ခံစားချက်တွေမရှိကြပေမယ့်၊ ငါတို့အတူတူ သီချင်းဆိုနေကြတုန်းပါပဲ။ အဖွဲ့ဝင်အချို့သည် တူညီသောခံစားချက်များကို မတူညီသောသီချင်းများဖြင့် မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဖော်ပြကြသည်။ ငါတို့အတူတူ သီချင်းဆိုနေကြတုန်းပဲ။ “ဆာလံသီချင်းများ၊ ဓမ္မသီချင်းများ၊ ဝိညာဉ်ရေးသီချင်းများဖြင့် အချင်းချင်း အားပေးကြပါ။” (ဧဖက် 5,19) ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ငါတို့တွေ့ဆုံရမယ်။
တေးဂီတသည်စည်းလုံးမှုကိုပြသသင့်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သဘောထားကွဲလွဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အုပ်စုများသည်ဘုရားသခင်အားနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ချီးမွမ်းကြသည်။ မတူညီသောယဉ်ကျေးမှုများကိုမြှို့နယ်အားလုံးနီးပါးတွင်တွေ့ရသည်။ အဖွဲ့ဝင်အချို့သည်သီချင်းအသစ်များသင်ယူလိုကြသည်။ တချို့ကသီချင်းဟောင်းတွေသုံးချင်ကြတယ်။ ဘုရားသခင်ကနှစ်မျိုးစလုံးကိုနှစ်သက်သလိုပဲ သူသည်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆာလံသီချင်းများကိုနှစ်သက်သည်။ သီချင်းအသစ်တွေလည်းကြိုက်တယ်။ သီချင်းဟောင်းအချို့ဖြစ်သောဆာလံသီချင်းများကအသစ်သောသီချင်းများကိုအမိန့်ပေးကြောင်းသတိပြုရန်မှာလည်းအထောက်အကူပြုသည်။
“ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၊ ထာဝရဘုရား၌ ဝမ်းမြောက်ကြလော့။ တရားသဖြင့် ချီးမွမ်းကြစေ။ ထာဝရဘုရားအား စောင်းတီး၍ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းကြလော့။ ကြိုးဆယ်ချောင်းဖြင့် ထောမနာသီချင်းဆိုကြလော့။ သီချင်းအသစ်ကို သီဆိုပါ။ ရွှင်မြူးသောအသံဖြင့် ကြိုးများပေါ်တွင် လှပစွာတီးနေသည်။' (ဆာလံ ၃3,13).
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားကျောင်းသို့ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ဟာအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့တေးဂီတလိုချင်တယ်၊ အဲဒါကို ၀ မ်းသာကြောင်းဖော်ပြတဲ့တေးဂီတကိုသူတို့ကအဲဒါကို ၀ မ်းသာစရာအဖြစ်နားလည်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောသီချင်းများကိုသာဆိုပါကအခြားသူများထက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သုခချမ်းသာကိုဂရုစိုက်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ခေတ်သစ်သီချင်းအချို့ကိုမလေ့လာမီ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များလာရန်ကျွန်ုပ်တို့မစောင့်နိုင်ပါ။ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝစွာသီဆိုနိုင်ဖို့အခုသူတို့ကိုသင်ဖို့လိုတယ်။ သို့သော်တေးဂီတသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်ပြုရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြရုံမျှမကဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန်များစွာရှိသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးဖြစ်စဉ်များပါ ၀ င်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လဲလှယ်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်ဆုတောင်းခြင်းပုံစံဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏စုဝေးရောက်ရှိနေသောလူများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားပြောဆိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုကဗျာနှင့်သီချင်းများသာမကသာမန်စကားလုံးများနှင့်ဘာသာစကားများဖြင့်ပါချီးမွမ်းကြသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးအတူတကွဆုတောင်းခြင်းသည်ကျမ်းစာပုံနမူနာဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသာမကအမှန်တရားလည်းဖြစ်သည်။ တစ် ဦး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိုက်ဖို့အစိတ်အပိုင်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၌အမှန်တရားကိုလိုအပ်ပြီးဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်၌သမ္မာတရားကိုတွေ့ရှိရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ တရားဒေသနာသည်ဤအခွင့်အာဏာအပေါ်အခြေခံရမည်။ ငါတို့သီချင်းတွေတောင်မှအမှန်တရားကိုရောင်ပြန်ဟပ်သင့်တယ်။
ဒါပေမယ့်အမှန်တရားဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုဘဲငါတို့ပြောနိုင်တဲ့မရေရာတဲ့စိတ်ကူးမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင့်အမှန်တရားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဒါဟာငါတို့ဆီကအဖြေတစ်ခုလိုတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးများ၊ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်တရားဒေသနာသည်ဘဝနှင့်သက်ဆိုင်ရမည်။ တရားဟောချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အယူအဆများကိုသင်ကြားသင့်သည်၊ အိမ်တွင်နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့၊ တနင်္လာနေ့၊ အင်္ဂါနေ့စသည်တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တွေးတော၊
တရားဒေသနာများသည်မှန်ကန်ပြီးကျမ်းချက်အပေါ်အခြေခံရမည်။ တရားဒေသနာများသည်လက်တွေ့ကျရမည်၊ စစ်မှန်သောဘဝကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ တရားဒေသနာများသည်စိတ်ခံစားမှုနှင့်နှလုံးသားထဲမှတုန့်ပြန်မှုကိုကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်စေရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကိုနားထောင်ခြင်းနှင့်၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောရွေးနှုတ်ခြင်း၌အပြစ်များအတွက်နောင်တရခြင်းနှင့် ၀ မ်းမြောက်ခြင်းအားဖြင့်တုံ့ပြန်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
အိမ်၌တရားဒေသနာကို MC / CD တွင်ဖြစ်စေ၊ ရေဒီယိုတွင်ဖြစ်စေနားထောင်နိုင်သည်။ တရားဒေသနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ချာ့ချ်ဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းမှုကိုအပြည့်အဝမရရှိနိုင်ပါ။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုပုံစံအနေနှင့်၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံးနေသောအရာမှာကျွန်ုပ်တို့အတူတကွချီးမွမ်းသီချင်းဆိုခြင်း၊ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကိုအတူတကွတုန့်ပြန်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်အမှန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်အချင်းချင်းတိုက်တွန်းခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်အချို့သည် ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုသို့ မရောက်နိုင်ပါ။ မင်း တစ်ခုခု လွဲနေတယ် - လူအများစုက အဲဒါကို ကောင်းကောင်းသိတယ်။ သူတို့အတွက် ဆုတောင်းပြီး အတူတူ ဝတ်ပြုနိုင်ဖို့ သူတို့ဆီ အလည်လာဖို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန်ပဲဆိုတာ သိပါတယ် (James 1,27).
အိမ်နှင့်သက်ဆိုင်သောခရစ်ယာန်များသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်သော်လည်းသူတို့သည်အခြားသူများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးအရအမှုဆောင်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ“ အိမ်တွင်နေ” ရန်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်လိုအပ်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ခြွင်းချက်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်ရှိသောတပည့်တော်များအားယေရှုထိုသို့မပြုစေချင်ပါ။
ဝတ်ပြုရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်ပြုရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သီတင်းပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့ပြုလေသမျှအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးရန်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ ၀ င်ရမည်။ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုသည်၎င်း၏ပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်ထံကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်ပုံတွင်ကိုယ်ပိုင်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ တိုးတက်မှုအတွက်ဤအရာများသည်လုံးဝလိုအပ်ကြောင်းအတွေ့အကြုံကပြသသည်။ ဝိညာဉ်ရေးတွင်ရင့်ကျက်သူများမှာဘုရားသခင်အကြောင်းသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်၌လေ့လာလိုကြသည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်ထံသူတို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုဖြေရှင်းရန်၊ သူတို့နှင့်အတူသူတို့၏ဘဝကိုမျှဝေရန်၊ သူနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ရန်၊ သူတို့၏ဘဝတွင်သူအမြဲရှိနေကြောင်းသတိပြုရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့၏ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံး၊ စိတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းကိုလိုလားသင့်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒသည်မဟုတ်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ကျင့်သုံးသင့်သည်။
ဒါဟာ John Wesley တစ်ချိန်ကပေးခဲ့တဲ့အကြံဥာဏ်ကိုသတိပေးနေပါတယ်။ သူ၏ဘဝ၏ဤအဆင့်တွင်သူသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုအသိဉာဏ်ရှိရှိနားလည်သော်လည်းသူ၏နှလုံးသား၌ယုံကြည်ခြင်းကိုမခံစားခဲ့ရဟုသူကပြောသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်အကြံဥာဏ်များကိုယုံကြည်ခြင်းမရမှီတိုင်အောင်ဟောပြောပါ၊ ၎င်းသည်သင်၌ရှိလျှင်၊ ၎င်းကိုသင်အမှန်ပင်ဟောပြောလိမ့်မည်။ ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဟောရန်တာ ၀ န်ရှိကြောင်းသူသိသည်။ ပြီးတော့အချိန်တန်ရင်ဘုရားသခင်ကသူ့အားသူလိုချင်တာကိုပေးခဲ့တယ်။ စိတ်နှလုံးထဲ၌ခံစားနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းကိုသူပေးခဲ့သည်။ သူသည်ယခင်ကတာဝန်တစ်ခုအနေဖြင့်ပြုခဲ့သောအမှုကိုယခုသူဆန္ဒရှိစွာဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကသူလိုချင်သောဆန္ဒကိုသူ့အားပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူပြုလိမ့်မည်။
ဆုတောင်းခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းကိုတစ်ခါတစ်ရံဝိညာဉ်ရေးရာစည်းကမ်းများဟုခေါ်သည်။ “ ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း” သည်အပြစ်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်မလိုလားသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်စည်းကမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိအကျကငါတို့ကိုကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​ဆိုလိုတာကငါတို့ကိုသင်ပေးတယ်၊ သင်ယူဖို့ကူညီပေးတယ်။ ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်များသည်အချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများသည်ဘုရားသခင်ထံမှသင်ယူရန်အထောက်အကူပြုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာရန်အလေ့အကျင့်များစွာရှိသည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသားအများစုသည်ဆုတောင်းခြင်း၊ လေ့လာခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းများကိုရင်းနှီးကြသည်။ ရိုးရှင်းခြင်း၊ ရက်ရောခြင်း၊ ပွဲနေ့များသို့မဟုတ်မုဆိုးမများနှင့်မိဘမဲ့များသို့လည်ပတ်ခြင်းစသည့်အခြားစည်းကမ်းချက်များမှသင်လည်းသင်ယူနိုင်သည်။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများသို့တက်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်တစ် ဦး ချင်းဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်ဝိညာဉ်ရေးစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းခြင်း၊ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းနှင့်အခြား ၀ ိညာဉ်ရေးရာအလေ့အကျင့်များအကြောင်းအခြားအုပ်စုများသို့လည်းသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းထို ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုမျိုးကိုအခြားခရစ်ယာန်များတွေ့မြင်နိုင်သည်။
စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်မှန်တဲ့နာခံမှုကို ဦး တည်စေတယ်။ ဒီနာခံမှုဟာပျင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်တောင်ငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်ဆိုရင်တောင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြုအမူကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိညာဉ်တော်နှင့်အမှန်တရား၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ အိမ်၌၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဘုရားသခင့်လူမျိုးတော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးဘုရားကျောင်း၏လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြစ်ကြသည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်လျှောက် ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်များက အခြားသူများကို သွန်သင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ဤသည်မှာ ခရစ်ယာန်လူနေမှုပုံစံ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ “သို့ဖြစ်၍ သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို တပည့်ဖြစ်စေ၍ ငါမှာထားသမျှကို နာခံတတ်အောင် သွန်သင်ပေးလော့” (မဿဲ ၂။8,19၂၀)။ လူတိုင်းသည် တပည့်ဖြစ်စေ ဆရာဖြစ်စေ ၊ အများစုမှာ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးစလုံး ဖြစ်ရမည်။ “ပညာရှိသမျှဖြင့် အချင်းချင်းဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့။” (ကောလောသဲ၊ 3,16) ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားခရစ်ယာန်များထံမှ သင်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘုရားကျောင်းသည် ပညာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပေါလုက တိမောသေအား ဤသို့ဆိုသည်– “များစွာသောသက်သေများရှေ့၌ ငါ့ထံမှကြားရသောစကားကို သစ္စာရှိသောသူတို့ကို သွန်သင်လော့။2. တိမောသေ 2,2) ခရစ်ယာန်တိုင်းသည် ခရစ်တော်၌ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အဖြေတစ်ခုပေးရန် ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကို သင်ကြားနိုင်သင့်သည်။
သင်ယူပြီးသားတွေကော။ မင်းဟာအမှန်တရားကိုနောက်မျိုးဆက်တွေဆီလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်တဲ့ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သင့်တယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့သင်းအုပ်ဆရာမှတဆင့်သွားသင်ကြားအများကြီးရှိပါတယ်။ သို့သော်ပေါလုကခရစ်ယာန်အားလုံးကိုသင်ကြားရန်မှာထားခဲ့သည်။ အုပ်စုငယ်များသည်၎င်းကိုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ရင့်ကျက်သောခရစ်ယာန်များသည်စကားနှင့်ပုံသက်သေဖြင့်သင်ပေးနိုင်သည်။ သူတို့ကိုခရစ်တော်မည်သို့ကူညီပေးခဲ့ကြောင်းသင်အခြားသူများအားပြောပြနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလာရင်တခြားသူတွေဆီကနေအားပေးမှုကိုရနိုင်တယ်။ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာလျှင်အားနည်းသူများကိုကူညီနိုင်သည်။
လူသည် တစ်ယောက်တည်းနေ၍ မကောင်း။ ခရစ်ယာန်တစ်ယောက် တစ်ယောက်တည်းနေဖို့လည်း မကောင်းပါဘူး။ 'တစ်ယောက်တည်းနေတာထက် နှစ်ယောက်တွဲလုပ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ပင်ပန်းခြင်းအတွက် ကောင်းသောအကျိုးကို ခံရကြ၏။ သူတို့ထဲက တစ်ယောက် ပြုတ်ကျရင် သူ့အဖော်က သူ့ကို ကူပေးလိမ့်မယ်။ လဲကျသောအခါ အထီးကျန်သောသူသည် အမင်္ဂလာရှိ၏။ နောက်တော့ သူ့ကို ကူညီမယ့်သူ မရှိဘူး။ နှစ်ယောက်သား အတူအိပ်နေရင်တောင် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နွေးထွေးစေတယ်။ ဘယ်လိုနွေးနိုင်မလဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် နိုင်နင်းနိုင်သော်လည်း နှစ်ယောက်က ခုခံနိုင်ပြီး ကြိုးသုံးကြိုးသည် အလွယ်တကူ ကျိုးသွားသည်မဟုတ်ပေ။” (ဒေ. 4,9-12) ။
အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အချင်းချင်း ကြီးပွားတိုးတက်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ တပည့်ဖြစ်ခြင်းသည် မကြာခဏဆိုသလို နှစ်လမ်းသွားလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ အခြားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ သို့သော် အချို့သော တပည့်များသည် ပို၍ ပြတ်ပြတ်သားသား စီးဆင်းနေပြီး ပိုမိုရှင်းလင်းသော အာရုံရှိသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်သည် သူ၏အသင်းတော်ရှိအချို့ကို ခန့်အပ်ခဲ့သည်– “အချို့တို့ကို တမန်တော်များဖြစ်စေရန်၊ အချို့မှာ ပရောဖက်များဖြစ်စေရန်၊ အချို့မှာ ဧဝံဂေလိဟောပြောသူများဖြစ်စေရန်၊ အချို့မှာ သန့်ရှင်းသူတို့အား ဓမ္မအမှုတော်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် အချို့ကို သိုးထိန်းများနှင့် ဆရာဖြစ်စေရန် ခန့်အပ်ထားသည်။ . စုံလင်သောလူသား၊ ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်း အတိုင်းအတာနှင့် ပြည့်စုံသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို သိကျွမ်းခြင်းသို့ ငါတို့ရှိသမျှသည် စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းသို့ ရောက်မှီတိုင်အောင် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာကို တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်” (ဧဖက်၊ 4,11-13) ။
ဘုရားသခင့်အခန်းကဏ္othersကိုအခြားသူများမိမိတို့၏အခန်းကဏ္ for များအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်ခေါင်းဆောင်များပေးပါသည်။ ရလဒ်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းလုပ်ငန်းကိုခွင့်ပြုသည့်အခါတိုးတက်မှု၊ ရင့်ကျက်မှုနှင့်စည်းလုံးမှုဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ကြီးထွားမှုနှင့်သင်ယူမှုသည်လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ပိုင်ကြွယ်ဝမှုမှလာသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုသွန်သင်ခြင်းနှင့်ပုံသက်သေပြခြင်း၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်အထူးတာဝန်ရှိသူများထံမှများစွာရရှိသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့သီးခြားခွဲထားသူများသည်ဤယုံကြည်ချက်၏ရှုထောင့်ကိုမေ့သွားကြသည်။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ယူခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ဘာသာတရားများနိုင်သမျှများများကိုအမှန်တရားသိရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာလေ့လာချင်ကြတယ်။ ထိုစိတ်ထက်သန်မှုအချို့ပျောက်ဆုံးသွားပုံရသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီအယူဝါဒအပြောင်းအလဲများကို၏မလွှဲမရှောင်ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရင်ကရှိခဲ့တဲ့သင်ယူခြင်းကိုချစ်မြတ်နိုးတာကိုပြန်ရဖို့လိုတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်သင်ယူစရာများစွာရှိပြီးလျှောက်ထားရန်များစွာရှိသည်။ ဒေသခံချာ့ချ်များသည်ကျမ်းစာလေ့လာမှုအဖွဲ့များ၊ ယုံကြည်သူအတန်းသစ်များ၊ angel ၀ ံဂေလိသင်တန်းများစသည်တို့ကိုကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုလူတို့အားလွတ်မြောက်စေခြင်း၊ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ကိရိယာများပေးခြင်း၊ သူတို့ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊
အသိုင်းအဝိုင်းသည်ရှင်းလင်းစွာခရစ်ယာန်များအကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်မိတ်သဟာယဖွဲ့ပေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရန်ရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပေးပြီးလက်ခံရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးများကသမိုင်းအရရောယခုအချိန်တွင်ပါမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးကြောင်းပြသသည်။ ရပ်ရွာဆိုသည်မှာအားကစား၊ အတင်းအဖျင်းများနှင့်သတင်းများအကြောင်းအချင်းချင်းပြောဆိုခြင်းထက်မက ပို၍ ဆိုလိုသည်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဘဝကိုမျှဝေခြင်း၊ ခံစားချက်များကိုဝေမျှခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပေးခြင်း၊ အချင်းချင်းအားပေးခြင်းနှင့်လိုအပ်နေသူများကိုကူညီခြင်းတို့ကိုဆိုလိုသည်။
လူအများစုသည် ၎င်းတို့၏အခက်အခဲများကို အခြားသူများထံမှ ဖုံးကွယ်ရန် Mask ကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တကယ်ကူညီချင်ရင် မျက်နှာဖုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ မြင်နိုင်လောက်အောင် နီးကပ်နေရမယ်။ ဆိုလိုတာက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာဖုံးကို တခြားသူတွေ သိနိုင်စေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာဖုံးကို အနည်းငယ်စွန့်လွှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။ အဖွဲ့ငယ်လေးတွေက ဒီလိုလုပ်ဖို့ နေရာကောင်းတစ်ခုပါ။ လူတွေနဲ့ နည်းနည်း ပိုသိလာပြီး သူတို့နဲ့ ပိုလုံခြုံတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ အားနည်းတဲ့နေရာမှာ သန်မာတယ်၊ အားနည်းတဲ့နေရာမှာ သန်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ငါတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဖေးမကူညီခြင်းအားဖြင့် ပိုအားကောင်းလာမယ်။ ယုံကြည်ခြင်း၌ ကြီးမြတ်သော်လည်း တမန်တော်ပေါလုပင်လျှင် အခြားခရစ်ယာန်များသည် မိမိ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုင်ခံ့စေသည်ဟု ခံစားမိသည် (ရောမ 1,12).
ရှေးအချိန်ကလူတို့သည်ထိုအရာကိုမကြာခဏမရွှေ့ခဲ့ကြပါ။ လူများအချင်းချင်းသိကျွမ်းသောအသင်းတော်များသည်ပိုမိုလွယ်ကူစွာဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သို့သော်ယနေ့စက်မှုထွန်းကားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်လူတို့သည်မကြာခဏအိမ်နီးချင်းများကိုမသိကြပါ။ လူတွေဟာမိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခွဲနေလေ့ရှိတယ်။ လူတွေကအမြဲတမ်းမျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ကြတယ်။ ဘယ်တော့မှလုံလုံခြုံခြုံမခံစားရဘူး၊ ဘယ်သူ့ကိုမှသူတို့ကဘယ်သူလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
ယခင်ချာ့ချ်များသည်အုပ်စုငယ်များကိုအလေးအနက်ထားရန်မလိုပါ - ၎င်းတို့သည်သူတို့ဘာသာသူတို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သူတို့ကိုအလေးပေးဖော်ပြရမည့်အကြောင်းရင်းမှာလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်အလွန်ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ချာ့ချ်၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သင့်သောလူ့ဆက်သွယ်မှုများကိုအမှန်တကယ်တည်ဆောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေများ၊ လေ့လာမှု / ဆုတောင်းခြင်းစက်ဝိုင်းများဖွဲ့စည်းရန်လမ်းလွှဲများယူရမည်။
ဟုတ်တယ်၊ ဒီအချိန်ယူရလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်တာဝန်များကိုကျေပွန်ရန်အချိန်ယူရသည်။ သူတစ်ပါးအကျိုးဆောင်ရန်အချိန်ယူရသည်။ သူတို့လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေရန်လည်းအချိန်ယူရသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏သခင်အဖြစ်လက်ခံပါကကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်အချိန်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုခရစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုတောင်းဆိုသည်။ သူသည်စုစုပေါင်းလက်နက်ချရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်၊
ဒီမှာ "service" ကိုသီးခြားအမျိုးအစားတစ်ခုအနေနဲ့စာရင်းပြုစုတဲ့အခါသင်ကြားရေးကိုမဟုတ်ဘဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုအလေးထားပါတယ်။ ဆရာသည်ခြေထောက်ဆေးခြင်း၊ ယေရှုလုပ်ဆောင်မည့်အရာအားဖြင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အရေးကြီးမှုကိုပြသသူဖြစ်သည်။ ယေရှုသည်အစားအစာနှင့်ကျန်းမာရေးစသောကာယရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသက်စွန့်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ငတ်မွတ်သူများအတွက်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းကာဆင်းရဲသားများအားဝေငှခြင်းဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများပေးခဲ့သည်။
ရှင်ပေါလုက အသင်းတော်အတွင်း အမှုဆောင်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောကြားခဲ့သည်။ “ထို့ကြောင့်၊ ငါတို့သည် အချိန်ရှိစဉ်အခါ၊ လူအပေါင်းတို့အား ကျေးဇူးပြုကြကုန်အံ့၊ အများအားဖြင့် ယုံကြည်သောသူတို့အား ကျေးဇူးပြုကြကုန်အံ့။” (ဂလာတိ၊ 6,10) ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ ဤသွင်ပြင်အချို့သည် အခြားယုံကြည်သူများနှင့် သီးခြားခွဲထားသူများထံမှ လွဲမှားနေသည်။ ဤနေရာတွင် ဝိညာဉ်ဆုလက်ဆောင်များ၏ သဘောတရားသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီအား “အားလုံး၏အကျိုးအတွက်” တစ်ကိုယ်တည်း၌ထားရှိခဲ့သည်။1. ကောရိန္သု ၁2,7) ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီတွင် အခြားသူများကို ကူညီနိုင်သည့် လက်ဆောင်များရှိသည်။
မင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးလက်ဆောင်တွေကဘာတွေလဲ။ သင်ရှာဖွေရန်၎င်းကိုစမ်းသပ်နိုင်သော်လည်းအများစုမှာသင်၏အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည်။ အောင်မြင်ခဲ့တာကိုမင်းအရင်လုပ်ခဲ့တာလား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိကြောင်းတခြားသူတွေဘယ်လိုထင်သလဲ အတိတ်ကအခြားသူများကိုသင်အဘယ်နည်းများဖြင့်ကူညီခဲ့သနည်း။ ၀ ိညာဉ်ဆုကျေးဇူး၏အကောင်းဆုံးစမ်းသပ်မှုသည်ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်အမှုဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ချာ့ချ်၏အခန်းကဏ္ different အသီးသီးကိုကြိုးစားရှာဖွေပြီးသင်မည်သည့်အရာအကောင်းဆုံးလုပ်သည်ကိုအခြားသူများအားမေးမြန်းပါ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အသင်းသားတိုင်းသည်အသင်းတော်၌အနည်းဆုံးအခန်းကဏ္ should မှပါဝင်သင့်သည်။ တဖန်အုပ်စုငယ်များသည်အပြန်အလှန် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလုပ်အတွက်အခွင့်အလမ်းများစွာနှင့်သင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သည့်အရာနှင့်သင်နှစ်သက်သောအရာများကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်အခွင့်အရေးများစွာရှိသည်။
ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဝန်းကျင်ရှိကမ္ဘာကြီးအားနှုတ်ကပတ်တရားတော်၌သာမကထိုစကားများနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်လည်းဆောင်ရွက်သည်။ ဘုရားသခင်သည်မိန့်မြွက်တော်မူရုံသာမကသူပြုမူခဲ့သည်။ လုပ်ရပ်များကဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်သည်ဆင်းရဲသားများအားကူညီခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေသူများကိုနှစ်သိမ့်ပေးခြင်း၊ သားကောင်များအားဘဝတွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားတွင်အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြနိုင်သည်။ practical ၀ ံဂေလိတရားကိုမကြာခဏတုံ့ပြန်သောသူတို့သည်လက်တွေ့ကျအကူအညီလိုအပ်သူများဖြစ်သည်။
ကာယရေး ၀ န်ဆောင်မှုကို support ၀ ံဂေလိထောက်ခံမှုအဖြစ်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ရှုမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းကို ev ၀ ံဂေလိလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ သို့သော် ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ကိုပြန်လည်ရယူရန်မကြိုးစားဘဲခြွင်းချက်မရှိလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခွင့်အရေးအချို့ပေးပြီးလိုအပ်ချက်ကိုမြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုဖွင့်ပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သာလျှင်အစေခံကြသည်။ လူများစွာကိုသခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များဖြစ်လာစေရန်ချက်ချင်းမတောင်းဆိုဘဲသူကျွေးမွေးပြီးကုသပေးခဲ့သည်။ သူလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကိုလုပ်ရမယ်၊ ပြီးတော့သူကသက်သာအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူမြင်တယ်။
သခင်ယေရှုက“ ဤလောကသို့ သွား၍ theဝံဂေလိတရားကိုဟောကြလော့။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ဒီဒေသမှာတိုးတက်ဖို့အများကြီးကျွန်တော်တို့မှာနေရာအများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းယုံကြည်ခြင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုကြသည်။ ခမည်းတော်သည်သူတို့ကိုခေါ်တော်မမူပါကလူများသည် ပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်ပါ။ သို့သော်ထိုအချက်ကကျွန်ုပ်တို့သည် the ၀ ံဂေလိတရားကိုမဟောသင့်ဟုမဆိုလိုပါ။
message ၀ ံဂေလိတရား၏ထိရောက်သောဘဏ္stာစိုးများဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားကျောင်းအတွင်းယဉ်ကျေးမှုအပြောင်းအလဲလိုအပ်သည်။ အခြားသူများကိုထိုသို့ခွင့်ပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မကျေနပ်နိုင်ပါ။ ရေဒီယို (သို့) မဂ္ဂဇင်းတခုခုမှာလုပ်ဖို့တခြားသူတွေကိုငှားရမ်းတာကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤofဝံဂေလိတရားသည်မမှားပါ၊ သို့သော်မလုံလောက်ပါ။
angelဝံဂေလိတရားသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမျက်နှာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုသတင်းစကားတစ်ခုပို့ချင်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကိုသုံးခဲ့တယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၌ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုဟောပြောရန်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ယနေ့သူသည်သူ၏သားသမီးများ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝပ်တော်မူသောသူများကိုသတင်းတရားကိုဟောပြောရန်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုတိုင်း၌မှန်ကန်သောပုံစံကိုပေးဖို့စေလွှတ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကို မျှဝေရန် စိတ်အားထက်သန်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုရှိရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးနားချင်းများထံ အနည်းဆုံး ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ တစ်စုံတစ်ရာကို ပေးဆောင်သည့် ဧဝံဂေလိတရားအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှု လိုအပ်ပါသည်။ (ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်ယာန်များဖြစ်သည်ကိုပင် သိကြပါသလား။ ခရစ်ယာန်များဖြစ်ရခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ပျော်ရွှင်နေကြပုံပေါ်ပါသလား။) ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိစ္စတွင် ကြီးထွားပြီး တိုးတက်နေသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုကြီးထွားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဝန်းကျင်ရှိလူများအတွက်ခရစ်ယာန်သက်သေခံနိုင်ပုံကိုစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ အသင်း ၀ င်တိုင်းကိုအမိန့်ပေးရန်လိုက်နာရန်၊ အဖြေပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ အသင်း ၀ င်တိုင်းကို ev ၀ ံဂေလိတရားအကြောင်းဖတ်ရန်နှင့်သူတို့ဖတ်ရှုသည့်အတိုင်းကျင့်သုံးရန်ကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းပါသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အတူတကွလေ့လာပြီးကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရန်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အားပေးနိုင်သည်။ အုပ်စုငယ်များသည် angel ၀ ံဂေလိတရားကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်သည်။ အုပ်စုငယ်များသည် ev ၀ ံဂေလိလုပ်ငန်းများကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်လေ့ရှိသည်။
အချို့ကိစ္စများတွင်အသင်းဝင်များသည်သူတို့၏သင်းအုပ်ဆရာများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာသင်ယူနိုင်သည်။ ရပါတယ်။ ထိုအခါသင်းအုပ်ဆရာအဖွဲ့ဝင်မှသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးအမျိုးမျိုးပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းသားအချို့အား awak ၀ ံဂေလိတရားကိုနိုးထစေခြင်းနှင့် ဦး ဆောင်ခြင်းအားပေးခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်းအုပ်ဆရာကထိုလူကို this ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောရန်ထိုကိရိယာများကိုမပေးနိုင်ပါကသင်းအုပ်ဆရာသည်ထိုလူကိုအခြားသူများအားပုံသက်သေပြရန်နှင့် church ၀ ံဂေလိတရားကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုလုံးကြီးထွားရန်အားပေးသင့်သည်။ ဤဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ခြောက်ပိုင်းခွဲခြားမှုအစီအစဉ်တွင် angel ၀ ံဂေလိတရားကိုအလေးပေးဖော်ပြရန်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရသည်။